NTFS နဲ့ USB Drive ကို Format ချနည်း ~ မျိုးကို
NTFS နဲ့ USB Drive ကို Format ချနည်း
09:24 How To, Technique, USB, Window7No comments
1. ပထမဆုံး Computer ကို USB Drive ကို တပ်လိုက်ပါ..။ Desktop ပေါ်က Computer Icon ကို Right Click နှိပ်ပါ...။ Manage ကိုရွေးပါ...။
2.Device Manager ကိုရွေးပါ..။ Disk Drives ကိုဆက်သွားလိုက်ပါ..။ ကို စိုက်ထားတဲ့ USB Drive ကိုတွေ့ ရမှာပါ...။
3.Disk Drive အောက်က USB Drive ကို Right Click ကို နှိပ်ပီး Properties ကိုရွေးပါ။
Policies Tab ကို သွားလိုက်ပါ...။ခုအခါမှာ Option နှစ်ခုကို တွေ့ ရမှာပါ..။ Default အနေနဲ့ ရွေးထားတဲ့ Optimize for quick removal နဲ့ Optimize for performance ကိုတွေ့ရမှာပါ..။ အဲဒီမှာ Optimize for performance ကို ရွေးလိုက်ပါ။
4. NTFS နဲ့ USB Drive ကို Format ချဖို့ Enable ဖြစ်သွားပါပီ..။
5. Computer ထဲက Drive ကို Right Click နှိပ်လိုက်ပီး Format ကို ရွေးလိုက်ပါ..။ File System Drop Down လေးကျလာရင် NTFS ကိုရွေးလိုက်ပါ..။
ဒါဆိုရင်တော့ USB flash drive or external USB hard drive လေးလုံခြုံသွားနိုင်ပါပီ...။
Translation Source: http://www.online-tech-tips.com